Harafesina | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ahoana no hiarovana ny paozin'ny "katedraly" amin'ny aretina sy ny bibikely
Mandritra ny vanim-potoana fampandrosoana mavitrika amin'ny teknolojia momba ny fambolena dia mora ny mahita karazana pira ambony mifanaraka amin'ny fepetra manokana. Misy karazana marika maro, avy amin'ny fanangonana ireo antsoina hoe "mpiasa". Ny karazana "miasa" dia fotoana fisedrana ary karazana bitsika. Anisan'izany ny "katedralina" pira, izay nahazo ny fitiavan'ireo mpamboly noho ny fikarakarana azy sy ny valiny azo antoka.
Ny torohevitra tsara indrindra momba ny fikarakarana taona
Andriamanitraetia dia voninkazo isan-taona isan-taona avy amin'ny fianakavian'ny vehivavy. Misy karazana zavamaniry 20 eo ho eo izay hita any amin'ireo kaontinanta amerikana. Ny voninkazo amin'ny zavamaniry dia tahaka ny azaleas. Andriamanitraetia no hatsaran-tarehy voalohany eo amin'ny fianakaviany ary matetika izy io no ampiasaina amin'ny fanorenana zaridaina. Fantatrao ve?
Fambolena fikarakarana sy fikarakarana ny singa
Periwinkle dia voninkazo tsara tarehy sy malefaka, matetika ampiasaina amin'ny famokarana akangom-bokatra sy voninkazo rehefa manamboatra zaridaina, zaridaina sy avenue. Androany dia misy karazany roa ambinan'ity zavamaniry ity, samy manana ny endriny manokana izy ireo, saingy rehefa mihalehibe dia samy mitaky izany fomba izany avokoa izy ireo.
Rehefa mamafy persily amin'ny lohataona, zavamaniry eny an-tsaha misokatra
Parsley dia iray amin'ireo zavamaniry voalohany mahafinaritra amin'ny lohataona miaraka amin'ny fofona manitra. Noho ny habetsahan'ny vitaminina sy ny microelements, dia ampiasaina amin'ny fomba mahandro sy ny fanafody. Ireo mpamboly efa za-draharaha dia milaza fa ny fambolena voalavo amin'ny parsley amin'ny lohataona eny an-kalamanjana dia hanome vokatra tsara.
Ny fomba hiatrehana ny bibikely sy ny aretina ao Tui
Iray amin'ny goavana malaza dia thuja. Nambolena tany amin'ny zaridaina, lalambe izy, nanamboatra ny faritra akaikin'ny tranoben'ny fitantanana, matetika nambolena tao amin'ny kianja dacha na zaridaina. Indrisy anefa, thuja dia mora amin'ny aretina sy ny bibikely, ny fomba hiatrehana azy ireo, hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity. Ahoana no hiatrehana ny aretina avy amin'ny thuja Ny ady amin'ny aretina thuja dia mety, fa tsara kokoa ny misakana azy ireo.
Ny fomba hikarakarana ny epiphyllum
Ny kaktus Epiphyllum dia zavamaniry epiphytika misy fakan-tavoahangy. Mason-drojo amin'ny voninkazo misy loko maitso maitso na trihedral, miaraka amin'ny ravin-kiram-baravarana. Ny zavamaniry dia mahatratra haavo 60-70 cm, ary mitaky fanohanana izany. Ny kibony dia manana ny endriky ny vavahady, ary ny halavany dia mety hahatratra 40 cm. Ny voninkazo ao amin'ny cactus dia mavokely, fotsy, mena, mavo ary volomparasy volon'ondry, miovaova 10-12 cm ny haben'izy ireo.
Ny fomba hiatrehana aretina sy bibikely aronii (tendrombohitra lavenona), voankazo mainty
Ny Chokeberry dia manana fiarovan-tena tsara, noho izany dia manelingelina ny aretina sy ny bibikely. Na izany aza, ny fahasamihafan'ny aretina dia mety tsy miovaova arakaraka ny toerana misy azy, ny toetrandro, ny tsy fisian'ny zavamaniry hafa sy ny antony hafa. Noho izany, tena zava-dehibe ny mahafantatra hoe inona avy ny bibikely sy aretina mety hitranga rehefa mitombo ny sakafom-biby mba hisorohana ny olana amin'ny orinasa.
Ahoana no hambolena ny tanimboly?
Ny vatosoa dia iray amin'ireo zava-maniry malaza indrindra, izay tsy ahafahana maka sary an-tsaina ny tsiron'ny sakafo maro sy ny zava-pisotro rehetra ankafizinao (ampy ny mahatsiaro ilay Mojito malaza - cocktail mamelombelona miaraka amin'ny fahavaratra, ny ranomasina ary ny hafetsen-dratsy). Fantatrao ve? Ny mena dia ampiasain'ny olombelona hatramin'ny ela.
Ahoana no hiatrehana ny aretim-bozaka
Ny felany no iray amin'ireo voninkazo malaza indrindra ampiasaina amin'ny fametahana bouquets. Mihalehibe eo amin'ny tany malalaka sy any amin'ny trano fonenana izy io. Ny voninkazo anana sy zaridaina matetika dia tsy marary amin'ny karazana aretina isan-karazany. Tsy afaka milaza ianao momba ny zavamaniry fambolena, izay matetika voakasika amin'ny bakteria, fungi, viriosy.
Karazana fambolena Chabo mitombo: Mamafy amin'ny seedlings sy ny fikarakarana any an-tsaha
Amin'izao fotoana izao isika dia hifantoka amin'ny fambolena Chabo mitombo amin'ny sehatra misokatra. Ity voninkazo ity dia tian'ny mpamboly voninkazo maro satria ny zava-misy dia maniry amin'ny voninkazo izay azo tapahina ho toy ny fanomezam-pahasoavana na ampiasaina mba hamoronana fiarahamonina, nanomboka tamin'ny andro voalohan'ny fahavaratra hatramin'ny fararano amin'ny fararano. Mitombo ho 60 santimetatra ny felam-boninkazo Shabo, ary mandritra ny vanim-potoana iray dia mitombo avo 35 ny loko.
Ahoana ny fomba hanesorana ny fako amin'ny zavamaniry
Ny teny hoe "rust" dia mifandray amin'ny metaly. Toa hita ihany koa fa antsoina hoe karazana aretina azo avy amin'ny pilina karazana zavamaniry isan-karazany izany, izay mahavita manimba ny ankamaroan'ny orinasa, raha tsy mifanaraka amin'izany. Inona no harafesina mampidi-doza Tsy manimba ny endrik'ilay zavamaniry fotsiny ny harafesina, fa esory koa ny ao anatiny.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Harafesina